Izipho - le ndlela eqhelekileyo yokubonisa ingqalelo kunye nothando. Ngenxa yesi sizathu, emva kwesipho ngasinye, njengomthetho, zifihliwe iimvakalelo zabo neemvakalelo zabo. Kwaye kwenzeka ukuba ukufumana izipho ezivela kubameli besini esomeleleyo - umnqweno wemvelo wonkenakazi kwaye akukho nto ihlazo, kodwa abafazi bonke abanakho ukuziqhayisa ngoku. Abanye bafumana izipho ezininzi, kwaye abanye bangabi nto kwaye ngenxa yesi sizathu sifuna ukuqonda i-psychology yesintu kwaye siqonde uhlobo luni lwabafazi abathanda ukunika izipho?
Ngoko, kwipesenti enkulu zamatyala, amadoda anika izipho kubasetyhini abanjalo.
Abasetyhini abafuna ukuzenza
Nguwuphi na umfazi ofuna indoda ukuba inike izipho? - lowo unomdla kakhulu, kwaye akabonakalisi nantoni na kuye. Nangu indoda kwaye uzama ngale ndlela ukukhumbuza intombi yakhe. Ukuba umntu akanandaba nomfazi, akayi kunika izipho kuye. Kwaye inqubo yokukhohlisa ngoncedo lwezipho isekelwe kwinto yokuba amadoda angathanda ukubayisa, yintoni ebonisa uhlobo olunjalo lokuthandana nomfazi oyifunayo. Ngendlela, "ubuthongo" kwaye nje "ujikeleze" - iingcamango ezahlukileyo kakhulu ukuba intombazana ihlala idideke kunye.
Kubasetyhini babo ukuba bawanelise baze babonise iimvakalelo
Indoda ayiyi kunika isipho kumfazi wasemzini, kodwa kwakhona ukukholisa into adibana nayo yinto eqhelekileyo yendawo. Njengomthetho, apha unako ukugqamisa umzekelo othakazelisayo: ukuba umntu ubona ibhinqa kungekhona njengento yesondo, kodwa nangaphezulu (umbona njengomfazi nonina wabantwana abadibeneyo), ngokuqinisekileyo uya kumnika izipho aze athathe ingqalelo. Kodwa ukuba udibene nomfazi kuphela "ukutyelela", apha ngokuphathelele ubudlelwane, uthando kunye, ngokufanelekileyo, ngezipho, akukho mbuzo ongenakukwazi ukuhamba. Kwaye akunandaba nokuba umfazi uthembekile kwendoda okanye ayikho, ukuba umntu akacwangcanga nantoni na embi, akayi kuphinda achithe imali kwizipho kunye nokumangalisa.
Abasetyhini abafuna ukuhlala besondele kubo
Ukuba umntu uqala ukuphawula ukuba iimvakalelo zowesifazane kuye zibuthathaka, uzama ukubuyisela kwakhona zonke iindlela endleleni kunye nenkqubo, kuquka ukunikezelwa kwezipho kumfazi. Ukuba umfazi ushiya indoda kwaye akazami ukuyigcina okanye ukuzenza ukuba akukho nto eyenzekayo, ngoko uyavuma ngokuvisisana nesigqibo sakhe kwaye akayi kubona into yokuqalisa yonke into kwakhona.
Abafazi, phambi kokuba abantu bazive benetyala
Amadoda ayithandi ukuziva enetyala ngenxa yabo, yingakho bazama ukulungelelanisa baze batyeke "ngentambo emhlophe, ukuze inkohlakalo ingakwazi ukwenza." Amazwi abalulekileyo kule meko - "uzive unetyala", nangona kunjalo, umntu akanako ukuqonda oko. Kwaye ke, indoda, i-naskodiv, ixhathisa ibhinqa elithobekileyo (okanye kungenjalo). Ngendlela, apha siyakwazi ukuthatha amadoda angathembekanga, ukufumana izipho ezivela kubhishini elinenzuzo kakhulu.
Abasetyhini abangazi kakuhle
Apha, kwindawo yokuqala, yindoda eyonwabileyo. Abameli abacebileyo besondo esinamandla bafana nokuza kubonisa kwakhona ubukhulu babo namandla okanye baphumelele (bona iphuzu lokuqala). Kwakhona kunokwenzeka ukubandakanya apha kwakhona isipho sezipho ngaphandle kwento oyenzayo. Ngendlela, akunakwenzeka ukuba nabani na oya kukwazi ukukhuthaza umntu kulolu nyathelo, kuba yonke into eyenzekayo apha kuphela kwiqhinga lakhe.
Uhlobo lokugqibela lwabasetyhini abahlala befumana izipho ezivela kumadoda ngabafazi abanesisa. La mabhinqa ngokwawo athambekele kumntu ophethe izipho, apho afumana khona ngokubuyisela le ndawo kunye nengqalelo. Nantsi into epheleleyo kukuba abantu abathandi ukuba bafaneleke, ngokukodwa umfazi kwaye ngoko rhoqo bazame "ukubuyisela" ngokubonisa intombi yabo okanye abaziyo, ngokubuyisela isipho sakhe, kunye nomnye umnikelo ovela kuye. Le nkqubo, njengomthetho, isebenza kuwo wonke umgaqo oqhelekileyo: "Bambeni abanye njengoko ufuna ukuba bakuphathe." Ngoko unako ukusho ngokukhuselekileyo ukuba izipho ezifanelekileyo ezivela kubameli bezesondo ezinamandla zifumana abo bafazi abafanelanga ukugqithiswa kwamadoda kuphela, kodwa baqhubeka befuna umdla wakhe. La mabhinqa athembekileyo kwaye ngaphandle kwesizazela sazela izipho zabo!
Idini elikhulu ngenxa yokufezekisa okufunwayo
Umvuzo wesipinashi, igromegranate kunye ne-avocado
Indlela yokugcina impilo yokuzala ngokusemncinci
Indlela yokucwangcisa kakuhle iifayile
Iingoma kunye neengqinisiso zezixhobo ezintsha
I-Cocktail "i-Rye Manhattan"
Indlela yokwenza okulungileyo phakathi kwabafana?